Indlela autorun wagqoka imoto, isethaphu Umhlahlandlela
Ukuba khona motor uqalisa umsebenzi izinhlelo of zanamuhla imoto alamu cishe saziso. Uma module enjalo muva enikeziwe premium telematics kits impendulo kuphela namuhla futhi elula ephansi ekupheleni onobuhle kukunikeza ithuba efanayo. Kuyini autorun ezikhangayo? Ukuze uhlelo ezinjalo - wukuqinisekisa ukushisa umshini phambi indlela kuso, kanye ukuthuthukisa ukuphepha yayo. Nokho, konke lokhu ngeke kwenzeke kuphela uma izinga ukufakwa module ukumisa.
Kuyini module uqalisa?
Le divayisi encane okungatholakala enikeziwe kokubili ngokwehlukana futhi njengengxenye mkhosi. Kodwa noma kunjalo module izosebenza phezu okuwuphawu control unit, ngakho uyithenga eceleni ngaphandle ohlelweni nokuvikeleka nje kwenza akukho mqondo. Uyini ukuzidlalela ku izimoto kusuka iphuzu lobuchwepheshe umbono? module kagesi kuyinto edluliselwe elakhiwa ku inethiwekhi ugibelile futhi eminye kulingisa umsebenzi ukhiye ukuthungela. Ukuze uqonde okushiwo lalomsebenti kufanele ubuyele emuva uqalisa umqondo oyinhloko. It yakhelwe ukusebenza kwanoma uhlelo Ukushisa motor ngenjongo bafudumale. Kufutfumeta injini, futhi salon. Kute kwetfulwe umsebenzi kuze Ukulisebenzisa ngokuqondile kanjena umshini, nje usebenzise edluliselwe ngokuzenzakalelayo sekuqalile motor nge bafudumale.
Indlela ukusetha autorun?
Iphakheji ubuncane kuhlanganisa uqalisa edluliselwe, ukushisa Nciphisa tubing, ukulawula ikhebula, ugesi Izintambo zikagesi ezisobala kanye imishini elisizayo for nenkanuko edlulele. Ukuze operation esitebeleni of module liyadingeka a khulula isiteshi mkhosi iyunithi - isb, umugqa ingasetshenziswa kokuvula tailgate. Kodwa ngoba cishe zonke yesimanje alamu amasethi eziningana khulula uxhumano imigqa, kule ngxenye azikho izinkinga. Wiring uhlelo kungenzeka umuntu - ke unamathele ikhithi uqalisa. Supply module ngokuvumelana isikimu ejwayelekile kungaba jikelele yonkana egumbini lokuqondisa. Isetshenziselwa ukuxhuma ibhodi module ukuxhuma ezikhumulweni kusukela ukuziqalela futhi ukuthungela. Ngokuvamile, isikulufa ezikhumulweni zisetshenziselwa ukuxhuma amandla wesifunda 12 W. ngokuvamile kufanele ubhekane izintambo eziluhlaza, ezimnyama - sokuhambisana yabo ukuqashwa ngeke kusadingeka ukuba uhlole bhukwana umsebenzisi imodeli ethize. Ngemuva yokuxhuma izifunda benzelwe futhi snap enamathiselwe crimped.
Uxhumano we inzwa kokungathathi hlangothi
Lokhu olwengeziwe ukulawula umsebenzi ukudluliswa, okuyinto ngeke engadingekile kulabo abafuna ukuthuthukisa izinga imoto sesivikelo. Kulokhu, lo module kuyodingeka isiteshi obukhethekile inzwa ukuqapha knob igiya. Lokukhipha kusuka esibayeni isigwedlo zizambalekela lokususa metallic umzimba. Ngesikhathi ukuphululwa kwakwenzeka kuye futhi kuvalwe isiqalo injini. By kokungathathi hlangothi control inzwa kufanele uthenge ngokwehlukana futhi neodymium uzibuthe. Ukuba khona kwawo eduze lithuthukise wesifunda kagesi. ochwepheshe batusa futhi wena ukuxhuma kwi-line control inzwa kusuka module, okuzokwenza agijime autorun. Beka idivayisi efanele wesifunda kagesi kungaba kususwe kuphela uma ukudluliswa, ukuthi abathathi hlangothi - leli phuzu Kufanele kucatshangelwe. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ephelele inzwa module PPC akusho ukuthi akunakwenzeka ukuba kusebenze sici esinjalo. Emakethe eziningi inzwa kokungathathi hlangothi jikelele, okuyinto organically bafakwe ejwayelekile uqalisa wesifunda.
Ukubeka imingcele yokusebenza
Ingabe zingalawulwa ngokuyinhloko ngokusebenzisa induku mkhosi, + ngakho ngaphambi module ukuze lusahleleka usebenzisa akude ukufinyelela umsebenzi. Ukuqala ukusetha izindlela kungenzeka wokusebenza yenjini, kanye nenani ematfuba ezokwenza abangelwe emva isignali Tacho. Kwalandela inkosikazi engumakhelwane nayo engcono isikhawu ukuziqalela operation, phakathi kwesikhathi lapho motor icushiwe. Uma kuziwa amayunithi udizili, kungase kudingeke ehlukile ukufakwa isikhathi phakathi ukusebenza kwawo ukuthungela futhi ukuqala ukuziqalela. Ngo ukusebenza kwansuku zonke kwe-oda module injini uqalisa kuyinqubo ehlelwe futhi nemingcele ezifana isikhathi elifudumele-up, inani siqala, isikhathi ukuvala timer, imibuso isipele, nokunye. D.
Njengoba sekushiwo, uhlelo lokulawula kuyodingeka unamathele ngu, ngakho kanye izilungiselelo esibekiwe umsebenzi elihambisana inkinobho ethize akude. imodeli Ukusebenza kungaba kanje: umsebenzisi akude uqale nge timer ke ngaso kanye isikhathi esimisiwe, injini esebenza futhi imoto iyazifudumeza. ukusebenza ngamunye oyokwenziwa ngokuhambisana imingcele wasabela kodwa ungasebenzisa izindlela eziningana ukusebenza kwe-module nge kushintshwe ngesizini.
Kukhona omunye ehilelekile isebenzisa Amadivayisi ezifana elihlobene ne imininingwane yalolu immobiliser. Le ngxenye likhona isakhiwo ukuphepha kanye abazalwa ukuvimba autostart. Beka immobiliser zingabahileli nge-chip transponder okuxhunyanwa RF-isignali. Iyunithi kule divayisi kuhlanganiswe ikhodi ukhiye, isebenze immobiliser. Okusho ukuthi, ngesikhathi sokuhamba isignali uqalisa liphindwe kabili futhi iqembu kwi transponder ukuthi aqede ukukhiya injini.
Ubuchwepheshe ukuhlanganiswa uqalisa amamojuli ku eziyinkimbinkimbi okuwuphawu ulula futhi ezingase zithathwe i umshayeli abavamile. Ephambi kwezinduna amakhono kagesi ubunjiniyela kungenziwa uhlelekile futhi isimiso esiyinkimbinkimbi, okuzobe ahlanganisa imisebenzi eyengeziwe nge blocker mechanical, e inzwa efanayo hlangothi futhi nokunye. Vuliwe. Kodwa kubalulekile ukuba acabangele izingozi ezibangelwa module injini uqalisa, uma isetshenziswa ngendlela engafanele. Lezi zihlanganisa ngokweqile petrol kanye umthwalo ezengeziwe ku ibattery - futhi, uma ekuqaleni ngokungalungile ukubala gaphambi futhi ukuvala shaqa module. Kodwa ethile emibi kakhulu ezifana izinhlelo ochwepheshe naka okwandisa ingozi ukweba. It ixhunywe immobiliser off, futhi umsebenzi motor, futhi kakade kunciphisa nokuvikeleka umshini usebenza ukungabi yomnikazi.
Yohlobo lweToyota Corolla, ukubuyekezwa kanye Ukucaciswa
Volvo S40, ukubuyekezwa kanye izici
Wekulungisa nezakhamuzi ngaphandle upende - yini lobu buchwepheshe nokuthi ingasetshenziswa ekhaya?
DVR Ayengakwazi Khona Ukuphuma Endlini: Ukubuyekeza imifanekiso, izincazelo, imininingwane, ukufakwa
Kicx Kap-29 - thembeke nangemali ephansi
Asuma Sarutobi. Umlando uhlamvu
Toyota Avalon, ukubuyekeza
Impisi Japanese: incazelo kwezinhlobo, ukukhahlamezeka kwendawo, kubangela yokuqothulwa
Turmeric - kuyini? Turmeric: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications. Yiziphi izinzuzo turmeric? "Ubisi Golden" kusukela turmeric
Ukunyuka kwengcindezi ephansi. Iyini isizathu salokhu?
Emnyango: ubukhulu kanye izici ibhokisi ukufakwa
USergei Kempo - osemncane, kodwa onolwazi kakhulu! Biography, ifilimu, umsebenzi wezemidlalo